“Aabihiis ayaa burburiyay shaqadiisa” – La taliyihii hore ee Neymar Jr – Gool FM
“Aabihiis ayaa burburiyay shaqadiisa” – La taliyihii hore ee Neymar Jr
(Paris) 04 Luulyo 2019. La taliyihii hore Neymar Jr ee Eduardo Musa ayaa ku dhaleeceeyay aabihiis inuu isagu sabab u yahay burburka ku yimid wiilkiisa.
Waxaa hoos u dhac weyn ku yimid qaab ciyaareedka xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain laba sano kahor.
Paris Saint-Germain ayaa bixisay qiimaha lagu kansalay heshiiska uu Neymar Jr ku joogay garoonka Cump Nou, waxaana lagu qiyaasay aduun dhan 222 milyan euro, waana saxiixii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta addunka.
Tan iyo markaas kaddib, Neymar ayaa la kulmay dhaawacyo dhowr ah uu kulamo badan kaga maqnaa kooxda Paris Saint-Germain, waxaana sidoo kale la ganaaxay in kabadan hal jeer sababa la xiriira habdhaqankiisa, iyadoo sidoo kale dhawaantan lagu soo eedeeyay kiis ah kufsi.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa soo xigtay wareysi uu Eduardo Musa kaga hadlay xaalada adag uu ku sugan yahay Neymar Jr wuxuuna yiri:
“Neymar Jr iyo shaqsiyaadka u dhow waxay guranayaan waxay iyaga abuurteen”.
“Neymar wuxuu daacad u yahay kuwa isaga horey ula jiray bilowgii, gaar ahaan aabihiis, balse taasi isaga ayey dhibeysaa, Neymar aabihiis waxaa ka maqan xirfadnimo, wuxuuna xakameynayaa dhammaan qaybaha nolosha wiilkiisa”.
“Neymar waa qof wanaagsan, laakiin sawirka ay warbaahintu ka soo gudbinayaan waa wax si xoogana kaga soo horjeeda, waxaana mas’uul ka ah aabihiis”.
“Neymar waa inuu dib u soo ceshado awoodiisa ciyaareed, si uu u ilaabo muuqaalkiisa, sidaas darteed waa inuu iska ilaabaa wax walba isla markaana uu dib u soo celiyaa jeceylkiisa kubadda cagta taasina waxay ku xiran tahay isaga oo kaliya”.
Intaas kaddib Eduardo Musa ayaa waxaa laga weydiiyay suurtogalnimada uu Neymar dib ugu laaban karo kooxdiisii hore ee Barcelona wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa sidaas, laakiin ma aqaano in PSG ay u ogolaan doonto inuu baxo, balse waxaan u maleynayaa inay u fiican tahay inuu dib ugu laabto kooxda Barcelona”.
Xulka Netherlands oo iska xaadiriyey Final-ka Koobka Adduunka Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen Sweden… + SAWIRRO
“Messi wuxuu koob kula guuleysn karaa xulkiisa qaranka Argantina” - Ciyaaryahan hore ee reer Brazil ah